Tsy misy Radios ao amin'ny 737 paositra maro Prepar3dv4
fanontaniana Tsy misy Radios ao amin'ny 737 paositra maro Prepar3dv4
2 taona 1 andro lasa izay - 2 taona 1 andro lasa izay #733 by spilok
Ao amin'ny 737 pak for prepar3dv4, miasa tsara ny zava-drehetra afa-tsy rehefa tsindrio eo amin'ny lisitry ny radio. Fehiloha mainty kely fotsiny ihany. Na ahoana na ahoana fomba hampisehoana ny radio?
Sal. Izany dia mitranga amin'ny sambo Boeing 717
Last edit: 2 years 1 day ago by spilok.
2 taona 11 ora lasa izay #734 by Dariussssss
Azonao atao ve ny mametraka an'io P3D Forum eto?
Ity dia efa momba FSX ary FSX Steam.
2 taona 6 ora lasa izay #736 by rikoooo
Nanosika ny lohahevitra ho amin'ny sehatra tsara aho.
Raha mbola tsy miasa ny raki-peo dia azonao atao foana ny miditra ao amin'ny menio bar.
2 taona 3 ora lasa izay #738 by spilok
Tsia ... tsy afaka miditra amin'ny radio koa ianao. Mbola misy mainty foana.
Nanao fikarohana kely aho, ary satria ireo dia Boeings avy FSX ary ampifanarahina amin'ny P3d, toa tsy nahy nanafoana GAUGE tsy nahy aho na zavatra ho an'ny radio amin'ny Boeings. Mety ho rakitra CAB, tsy fantatrao.
Manantena aho fa misy olona afaka manampy ahy amin'ny famerenany io refy io. Tena tiako ny rakitra Boeing ao amin'ny Rickoooo ary tena te hampiasa azy ireo aho Prepar3dv4.
2 taona 3 ora lasa izay - 2 taona 3 ora lasa izay #739 by rikoooo
Avy eo, ity fitaovana mahagaga ity dia ho anao: Gauges Effects Recover Tool http://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/73/256
Ampahafantaro ahy raha manampy izany
Last edit: 2 years 3 hours ago by rikoooo.
2 taona 2 ora lasa izay #740 by spilok
Misaotra anao. Niezaka aho avy amin'ny tranokala AVSIM koa. Naka ny rohinao aho ary nanandrana indray, saingy TSY LUCK. Mbola misy mainty mainty tsy misy radio any amin'ny taloha FSX Boeing.
Manontany tena aho raha manao ny anarany ve ny fanovana ny config ao ary mamela azy hanangana? Heveriko fa azo antoka fa natao tahaka ny nataoko FSX?
1 taona 11 volana lasa izay #767 by spilok
Tsara daholo izao, ankehitriny. Ny famerenana manamboatra ny zava-drehetra.